Go’aanka Puntland ee shirka wada-tashiga oo la soo dhaweeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Go’aanka Puntland ee shirka wada-tashiga oo la soo dhaweeyay
Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo dhaweeyay go’aanka uu Maamulka Puntland ka qatay shirkii uu Farmaajo sheegay in lagu qabanayo Garowe bishaan February 15k-keeda, 2021-ka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo ayaa xalay sheegay in uu shir ugu yeerayo Madaxda Maamul Gobaleedyada kaas oo ka dhacaya Magaalada Garowe, hayeeshee Puntland ayaa sheegtay in aan lagala ashan go’aankaas, shirkuna ku habboon yahay in uu Muqdisho ka dhaco.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si weyn u soo dhaweeyay go’aanka Puntland, waxaana shaqsiyaadka ka hadlay arrintaan ka mid ah, MW hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed.
“ Waxaan soo dhaweynaynaa in shirka wadatashiga Qaran lagu qabto magaalada Muqdisho, ayna ka soo qeyb galaan dhamaan Saamileyda Siyaasadeed ee dalka iyo Beesha caalamka. Shirkana uu diiradda saaro buuxinta firaaqa dastuuriga ah ee uu dalku galay waxii ka danbeeyay 8dii February iyo qabsoomidda doorasho isla ogol ah loona dhanyahay”. Ayuu yiri Guuleed.
Haddii Maamulka Puntland ku adkeysto go’aankaan Farmaajo ayay qasab ku noqon doontaa in uu shirka u badalo maamul goboleed kale ama uu ku qabto magaalada Muqdisho oo ay Puntland ku talisay siyaasiyiintuna ku raaceen.